Project - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
simbi chubhu yekukurukurirana shongwe
Mongolia - 20meters 4 legged telecommunication tower 2022.03
Zita reProjekti: Mongila - 20meters 4 legged telecommunication tower
Mutengi akatiwana kuburikidza neAlibaba Muna Zvita 2021 yekubvunza 4 legged inotsigira 20meters telecom tower.
Iyo yakazara makumi maviri shongwe dzesimbi dzine hurefu hwemamita makumi maviri dzakagadzirwa, kugadzirwa uye kugadziriswa zvinoenderana nedhirowa yemutengi, uye inoputirwa uye kutumirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Nicaragua - 33KV Transmission line tower 2021.11
Zita rePurojekiti: Nicaragua 33KV Power Transmission Tower 30M Height Project
Mushure memwedzi miviri yekuedza kusingadzoreki nemutengesi, takazosvika kumubatanidzwa neNicaragua kupa 25m yakakwirira 33kV shongwe yemagetsi uye kusimudzira kuvaka kwemagetsi eNicaragua.
Myanmar - 11kv Transmission Line Tower 2021.06
Zita rePurojekiti: Myanmar 11KV Power Transmission Tower 27M Height Project
Myanmar Padauk Co., Ltd yakatiwana kuburikidza neAlibaba.com muna Nyamavhuvhu, 2020 yekutenga 8 seti shongwe dzekuyambuka rwizi.
Mushure memazuva gumi ekutaurirana, vanosarudza kutora dhirowa yedu yatinokurudzira zvinoenderana nezvavanoda & zvavanoda, vobva vatumira PO kwatiri.
Mongolia - 15meter Telecom Tower 2021.06
Mr Aibolat vakatiwana kuburikidza neAlibaba muna Kubvumbi 2021 kuti tibvunze 4 gumbo 15meter telecom tower.
Nekuda kwedenda iri, chirongwa chavo chave nemwedzi yakati kuti chiri kumashure kwenguva.Naizvozvo, kutenga uku kwakanga kuri kwokukurumidzira zvikuru, kwaida kuti tigadzire mukati memwedzi mumwewoiendesa kuEren inopisa, muganhu uri pakati peMongolia neChina.
Mazuva mashoma mushure mekurukurirano yekutanga, akaisa odha nesu, uye takapedza kugadzira uye nekuiendesa nenguva.Mufananidzo wakatumirwa nemutengi mushure mekunge chirongwa chapera Kero:Mongolia Date:23-06-2021
Philipines - 30meter Shongwe yeGorofu Driving Range 2020.03
Musi waKurume 2020. Mr H vakabatana neXY towers kuburikidza neALIBABA yeshongwe dzekutyaira gorofu. Shongwe yega yega inotakura madziro emambure anorema 100 kg achishanda akamira uye sirin'i inorema 30 kg pamusoro peshongwe yega yega pamakona ekurudyi kuyambuka kune inotevera shongwe. nguva dzenhaurirano naMr H nezve ruzivo pane yakatwasuka uye yakachinjika mutoro wehuwandu uye nemitengo yezvinhu.
Maererano neruzivo rwaVaH. XY yakagadzira shongwe ine makumbo matatu yaVaH. Shongwe yega yega inorema matani mashanu, inokwana matani mazana maviri.
Iraq- 220kV Electric Power Tower 2020.06
Zita reProjekti: Iraq 220kVPower Transmission Tower
Zvinoenderana nedhizaini yedhizaini yakapihwa nevatengi, takavaongorora, tichibva tatanga kugadzira nekugadzirisa.Mushure mekugadzirisa, takaita bvunzo yegungano, uye tikayedza kana zvinhu zvacho zvichisangana nemayero, izvo zvaigutsa pamwe chete kune vatengi.
Bengal ± 800 kV HVDC Transmission Project 2021.02
Zita rePurojekiti: Bengal ± 800 kV HVDC Transmission Project
Tine Kudyidzana neVatengi veBengal muProjekti iyi, ine Huremu Hwese hweMatani makumi manomwe, Iyo Order inosainwa muna Kukadzi 2021, uye Nguva Yekugadzira iMazuva makumi maviri nemaviri.Yakaiswa muKushanda Kazhinji muKutanga Kubvumbi 2021.
Kero: Bengal Date: 02-19-2021
Laos - 10KV Iron Zvishandiso 2021.01
Zita reProjekti: Laos - 10KV Iron Zvishandiso 2021.01
Kambani Yedu Inopa Laos Mutengi ane Power Transmission Tower Iron Accessories, Total Weight: 540 tons.The Order is Signed in January 2021, uye Nguva Yekugadzira ndeyeMazuva makumi maviri nemaviri.Yakaiswa muKushanda Kazhinji muKutanga Kubvumbi 2021.
Chile -110kV Transmission Tower 2020.09
Kuvakwa kutsva kwetambo ye110kV.Yese kureba kwemutsara i29KM, kona yesimbi shongwe ndeye makumi mapfumbamwe mabhesi, Toatl uremu 550 matani.Odha yacho yakasainwa munaGunyana 2020 kusvika pakuburitswa muna Gumiguru 2020, uye kutenderera kwacho kwaive kwemazuva makumi matatu nemashanu.Yakaiswa mukushanda zvakajairika kutanga kwaZvita 2020.
Sudan - 220kV Power Transmission Shongwe 2020.6
Iyo shongwe dzekufambisa ndeye Wind Power Project 220kV single line project, Wire :JL/G1A-300/40-24/7, Ground wire :OPGW-24B1-80.Hurefu hwakazara hwemutsara ndeye 19.35KM, Huwandu hwemakona simbi shongwe ndeye 45 seti, Huremu hwese i680 matani.Kurongeka kunosainwa muna Chivabvu 2020 kusvika pakuendeswa munaJune 2020, uye nguva yekugadzira mazuva makumi maviri nemashanu.Ichaiswa mukushanda zvakajairika kutanga kwaNovember 2020.
Kero :Sudan Date:2020.06
Uganda - 35kV Single Tube Tower YeMagetsi Magetsi Transmission 2020.04
Panguva ino tinopa monopole kune vatengi ve35kV Volatge simba rekufambisa, waya inotora JL/G1A-300/25 uye waya yepasi inotora OPGW-24B1-50.Yese kureba kwemutsara i9.5KM, kona yesimbi shongwe uye simbi pombi pole zvigadziko makumi matatu, Huremu hwese matani mazana maviri nemakumi matanhatu.Odha yacho yakasainwa muna Kubvumbi 2020 kusvika pakuunzwa muna Chivabvu 2020, uye kutenderera kwacho kwaive kwemazuva makumi maviri nemashanu.Yakaiswa mukushanda zvakajairika muna Nyamavhuvhu 2020.
Egypt - 110kV Monopole & Steel Tube Shongwe YeMagetsi Transmission 2020.01
Ichangobva kuvakwa single-circuit line purojekiti muEgypt, conductor JL/G1A-185/35-26/7 pasi mutsara GJ-70, hurefu hwese hwemutsetse i126KM.Total quantity angle steel tower is 311 sets, Huremu hwese 3150 matani .Zvakatora mazuva makumi mapfumbamwe mushure mekunge odha yasainwa muna Gumiguru 2019 kusvika pakupera kwekuendeswa kweshongwe muna Ndira 2020, uye mutsara wese wakaitwa muna Nyamavhuvhu 2020.
Mongolia -110kV Galvanized Steel Tower 2019.12
General nzvimbo: Mongolia, kuvakwa kutsva kwe110k kaviri zvishwe padivi remushandisiMongoriya project.Waya:JL/G1A-240/30.Ground waya: OPGW-24B1-80.Hurefu hwakazara hwemutsara ndeye 11KM, Huwandu huwandu: angle simbi shongwe ndeye 35 seti.Huremu hwese: 483 matani.Kurongeka kunosainwa munaGunyana 2019, uye nguva yekugadzira mazuva makumi maviri nemaviri.Yakaiswa mukushanda zvakajairika kutanga kwaKurume 2020.
Chitupa & Kuongorora Repo